Fasaxyada Safari ee Kenya, Safaris Kenya, Safarka Miisaaniyada Kenya, Safari Kenya, Safarka Miisaaniyada fasaxa
Miisaaniyadda Fasaxyada Safari
Tours Kenya, Safari Kenya, Safari Kenya, safarka safarka ee Tansaaniya
Xerada Kenya ee Safaris
Duufaanta Mount Kenya
Kenya - Safaris Tansaaniya
Tansaaniya Lodge Safaris
Tansaaniya Kaambooni Safaris
Cilmiga Safarka ee Mt Kilimanjaro
XARUNTA KENYA SAFARI
Meelaha ugu wanaagsan ee kaamil laga dejiyo & safarka hoyga raaxada leh Kenya & Tansaaniya.Gu dhow nafta nafta lamadegaanka Afrika & khibradda dabeecadda intii ugu wanaagsan.
KU SOO DHAWAADA BUDBET HOLIDAY SAFARIS
KENYA SAFARI 2019/2020 BUDHET SAFARIS
La safir khubaro aqoon u leh Afrika.
Miisaaniyadda Fasaxyada Safaris ayaa ka shaqeysa safarrada Kenya iyo Tansaaniya, iyadoo bixisa liistada adeegyada safarka safarka ee dhameystiran shaqsiyaadka iyo kooxaha labada dal. Miisaaniyadda Fasaxyada Safaris waxaa maamula xirfadlayaal aqoon sare leh, oo waayo-aragnimo u leh wax ka badan toban sano warshadaha dalxiiska. Shirkaddu waxay lashaqeeysaa iskaashiyo kala duwan oo muhiim ah oo ka socda wershadaha Safarka iyo Isbitaalka ee Kenya iyo Tansaaniya si ay u siiso macaamiisha adeegyadooda ugu wanaagsan. Waxaan leenahay adeegyo kaladuwan oo loogu talagalay in lagu habeeyo baahiyahaaga shakhsi ahaaneed oo shaqaalaheena takhasuska leh ay ka wada shaqeeyaan sidii aan u bixin lahayn adeegyada ugu wanaagsan macaamiisheenna kala duwan. Waxay ku yaalliin Xarunta Magaalada Nairobi, xafiisyadeennu waxay furan yihiin dhammaan maalmaha 7-da aroornimo, 00 maalmood usbuucii, iyagoo bixiya adeegyo taageero iyo codsiyo degdeg ah, 7/24
Kenya Safaris / Tansaaniya Safaris
3 MAALMAHA KENYA TOUR: MASAI MARA PACKAGE
Safarka ugu horeeya ee safarka Kenya, ee keydka ciyaarta Masai Mara, waa meel keyd ah oo caalami ah oo lagu ciyaaro maxaa yeelay socdaalka sannadlaha ah ee muhaajiriinta, ee loo yaqaan 'Hijrada Weyn', oo lagu qoray liiska XNUMX-aad ee adduunka.
5 MAALMO MT KENYA CLIMB- SIRIMON-SIRIMON ROUTE
Ku dhex kaynta duurka meel aad u ballaaran oo fiin ballaadhan oo aagga la isugu yimaaddo. Wadadu waxay ka bilaabmaysaa dhanka waqooyi-galbeed ee buurta u dhaw Nanyuki. Gaaritaanku waa kufilan yahay dhismooyinka guryaha cufanna waa kuwa ugu fiican dhinacaas buurta.
6 MAALMAHA KENYA SAFARI: MASAI MARA - LAKI NAKURU - AMBOSELI
Harada Nakuru had iyo jeer waxaa loo tixgaliyaa inay tahay haro wanaagsan oo haro sare ah. Farqiga u dhexeeya iyo kala-muuqashada muuqata ee ka dhexaysa haro-biyoodka gacmeed-biyoodka ah ee leh shimbiraha ugu wanaagsan iyo kaynta firfircoon.
6 MAALMO MALAHAN KILIMANJARO DAAWEYN: MACHAME ROUTE
Kani waa wadada ugu quruxda badan ee la maro Kilimanjaro. Qalabkaaga oo dhan iyo alaabtaada oo dhan baa la qoraa oo kariyena wuxuu diyaariyaa cuntadaada oo dhan, Meesha hoy ku taal jidka Marangu wuxuu ku yaal guryo.
8 MAALMAHA GUDAHA FARSAMADA SAFARI - MASAI MARA
3 Habeenimo Masai Mara Game Reserve- Kenya, halkaas oo aad ka heli doonto khibrad kabadan hal gaari wadis. 1 Habeenkii harada Nakuru halkaas oo aad ka arki karto ololka, wiyisha cad iyo madow iyo waxbadan oo intaa ka badan.
10 MAALMO KENYA IYO BANNAANKA TANZANIYA SAFARI: MASAI MARA
10 maalmood safarka duurjoogta ee Kenya iyo Tansaaniya waa safarkooda safarka oo ku siinaya khibradda safarka dabiiciga ah ee dhabta ah. Waxaan daboolnaa Masai Mara, Lake Nakuru, Serengeti, Ngorongoro Crater iyo Lake Manyara.
XARUNTA SAACADAHA SAFARI
Miisaaniyadda Fasaxyada Safari alaabooyinka waxaa ka mid ah safaris ballaaran oo safaris ah Kenya iyo Tansaaniya iyo Uganda. Lodge Safaris Luxury iyo heer dhexdhexaad ah Miisaaniyadda Kaambaraynta Safaris, Xeryaha Xannaaneynta Joogtada ah ee Fasaxyada Safaris, Duufaanta Kenya, Socodka Safaris safarro gaar ah oo loogu talagalay waddammada yar ee laga faa’iidaysto, dhaqanka iyo dalxiisyada qowmiyadeed iyo waliba fasaxyada xeebta.
Labada safri ee joogtada ah iyo Saflor-ka safaris ka sameysan ayaa labaduba waxay yihiin kuwo si tartan leh loo qiimeeyo oo si gaar ah loogu talagalay inay ku haboonaato miisaaniyadaada. Miisaaniyadda Fasaxyada Safari waxay bixisaa wareejin duulimaad oo khaas ah inta u dhaxaysa garoonka diyaaradaha Kilimanjaro iyo Arusha Waxaan sidoo kale leenahay adeegyo dhulka ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin qoritaanka huteellada iyo wareejinta garoonka diyaaradaha ee hoteellada ku yaal magaalada iyo hoteellada ka baxsan magaalada.
Miisaaniyadda Fasaxyada Safaris ayaa ka shaqeysa safarrada Kenya iyo Tansaaniya, iyadoo bixisa liistada adeegyada safarka safarka ee dhameystiran shaqsiyaadka iyo kooxaha labada dal.
Hoteellada iyo Safari Lodges
Adeeggeena macmiilka iyo dalxiiska
Tilmaame ayaa diyaar u ah inuu ku caawiyo.
St.Ellis House, Wadada Waabera
Rights 2019. Dhammaan Xuquuqda Waa La Siiyey. Miisaaniyadda Fasaxyada Safari
Naqshadeynta Websaydhka Webscreationsdesign.com